Ozi Buhari maka Ụbọchị Emume Mbilite N'ọnwụ Kraịst
Previous Article Bishọọpụ Nwokolo Agbapee Ụlọ Ụka Ọhụụ n'Ọnịtsha
Next Article Ụka Igunkwụ - Ndụ Ịchụ Àjà
E sonyere m ndị Naịjirịa, kachasị ndị otu Kraịst na mmemme nke mbilite n'ọnwụ Kraịst nke afọ puku abụọ na iri na iteghete.
Emume a bụ emume dị oké mkpa na ndụ ndị ụka ma na-egosi nzọpụta Chineke zọpụtara mmadụ, mmeri nke ìhè n'ebe ọchịchịrị dị, olileanya ebe olileanya na-adịghị na mmeri ezi ìhè meriri ajọ ihe.
Emume ndị ụka a na-egosi mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst, bụ oge dị mma iji ñomie ndụ ịhụnanya, ịchụàjà, mgbaghara, mwedanala, obi isi ike na ntachiobi, nke dị n'ime Kraịst ma bụrụkwa nke o gosipụtara n'oge ọ nọ n'ụwa.
Ka anyị were oge mmeri a were gosi ịhụnanya nye ndị agbataobi, ma nyere ndị chọrọ enyemaka n'etiti anyị.
Ala anyị nọ n'ihe anya mmeri maka ogbugbu, ntọrọ mmadụ na ịmebisi ihe bụ nke megasịrị n'ọtụtụ steeti n'oge na-adịghị anya.
Ihe ndị a ekwesịghị ịdị. Anyị ga-agba mbọ hụ na anyị jikọrọ ọnụ dịka nwanne na ezi agbataobi nke kwesịrị ịdị n'etiti ezi ụmụafọ ala anyị. Anyị agaghị ekwe ka ndị ndị ọjọọ nọ n'ime obodo anyị tinye nkewa n'ezi mmekọrịta na udo dị n'etiti anyị.
A mara m site na mkparịta ụka mụ na ndị isi ọlụ nchekwa, ndị gọvanọ steeti, ndị o metụrụ na obodo ọgbaghara ndị a dị, na ụmụ Naijiria bụ otu n'ọgụ megide ajọ ihe.
Ọchịchị a ga-eme ihe niile o nwere ike iji hụ na o nyere ndị ọlụ nchekwa ala anyị akọrọmgwa na ezi nkwado iji hụ na ha buru agha megide ihe ahụ niile na-echere ọnọdụ obodo anyị aka mgba. Anyị agaghị ekwe ka ndị na-achọ ihe ọjọọ na ọnwụ merie ala anyị. N'anya m, ala anyị ga-emeri ha - ndị ohi, ndị omekome, ndị nrọ na ndị ọzọ dị otú a.
N'Emume a dị nsọ, a na m arịọ ụmụ Naijiria ka ha nọgidesie ike n'ekpere ka udo na ezi nchekwa were laghachi n'akụkụ ala anyị niile. A na m arịọ ụnụ ka ume ghara ịkoropụ ụnụ maka ọdịnihu obodo anyị mara mma oge anyị na-eme ihe kwesịrị n'udo. Anya mmiri ga-adị n'abalị, mana iti mkpu ọṅụ ga-adị n'ụtụtụ.
E jighị m ohere nke abụọ ụnụ nyere site na ịtụnyere m nke ugboro abụọ egwuri egwu, kachasị olileanya nke ọtụtụ ụmụ afọ n'ebe idozi ezi ọnọdụ nchekwa, ọnọdụ akụnụba na ịmerị mago mago dị.
Ọrụ nke ọchịchị a dịka a na-akwado iwere ọchịchị a gaa n'ogogo ọzọ, bụ ka anyị na-egosi ezi ọchịchị, nke onye ọ bụla n'agbanyeghị ekpemekpe ma ọ bụ ebe onye sịrị bịa nwe ike ibi n'udo, rụọ ọrụ ma ga n'ihu; ebe ndị ji ọnọdụ ọchịchị ga-azara ọnụ ha, ndị na-emebi iwu abụrụkwa ndị ikpe mara.
Ọzọ kwa, a na m ekele ụmụnne anyị ndị otu Kraịst na Naijiria na mba ụwa niile ekele n'emume mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst.